Faallo :Madaxtooyadda Somaliland Maxaa Ka Higleh! | Somaliland Today
← DAAWO: Gabay Si Yaableh U Soo Koobaya Khasaaraha Dhaqaaale, Musuq Maasuq Iyo Qabyaladeed Ee Dalka Ka Dhacday Intii KULMIYE Talada Hayay.
Golaha Ammaanka Ee Qaramada Midoobay Oo Cunaqabateyn Adag Ku Soo Rogay Dalka Kuuriyada Waqooyi. →
Faallo :Madaxtooyadda Somaliland Maxaa Ka Higleh!
Marka xukuumadi ay karkaarka dhaafayso, waxa lagu gartaa muran ka dhex dilaaca, is casilaadda oo xadka ka baxdda, boob loo sii kala dheereeyo, ilayn mid waliba wuxu is leeyahay idiin dhamaataye yaan lagaa badsane, markaas buu jeebebka iyo baannanka daayoo, xataa uu is yidhaahaa sharabaadadda waxad qaadi kari waydo ku sii guro, sidda tan imika inoo dhisan. sideedaba-na is haysiga maamul waa calaamadaha kala yaacoodda, oo waxa dhex gasha kala shaki la is aamini waayo, aakhirkana midba wuxu doono buu xukuntaa, oo waa la iskala tagaa sharci iyo distoor, ka dibna waa ta badu-buurta hirdiday, waxa caynkaas ka dhigan oo si weyn inoogu muuqdda, in qasriggii madaxtooyaddii ay fiintu
dhex miranayso. isku daadatay, oo midba inta uu maqan yahay ka-ka sareeyaa, ama ka hooseeyaa uu amar u gaar ah dejinaayo, marka kii maqnaa yimaadana uu amar kale oo ka soo hor jeedda, kii uu bixiyey saaxiib-kiisii shaqadu ka dhexaysay uu isna ku dhawaaqaayo. dabeed meeshu way isku kartaa waa sidda Imika ka taagan madaxtooyada’e.
Aan kuu balbalaa-dhiyo’e in yar i amaanaysii dhega-haaga iyo indha-haaga, oo si caafimaad qabta iila akhri intan hoos ku qoran.
Wax la yidhi “Geelaw soco-soco oo marka aad ciin daaqdo baa laguu yaabaaye” Waxay bello ka hig leedahay Madaxtooyaddii Somaliland, oo isku jiq ah, iyo Askariga Xusbigga Kulmiye ku amar-ku-taagleeya, oo isna hoosta kaga sii maran, Wasiir ku sheega madaxtooyadda oo isagu munaafaqad ku laba codlaynaaya, foodana isu sii gelinaaya,mid kastana leh sax baad tahay, intaas iyo midba casaabad la sii talisa, baa akhrisatw isku haysata qasrigga, oo isku jiid-jiidanaysa, cid kala gurtaana aanay jirin ee ay isla wareertay, halka aynu wax ka sugaynaa waa meeshaas iyaddii is eryanaysa, hadaba bal is waydiiyoo maxaad ka cuni dheri isagi isku gubtay? jawaabtu waa waxba, ee gaajo iyo macaluul baa afku kula qaloocan doonaa. Waxay tahay mushkiladu, labaddii ay ummadani dooratay ( Waa Siilaanyo iyo Sayliciye) baa aan dabka kala qaadan, oo iyakii la kala hayaaye, ma cid bay markaa hadh u jiidayaan, saw maaha in aynu ka tashano, oo meel bed-qabta uga guurno, kaas oo ah Mucaaridka ( Waddani).
Muwaadin bal u fiirso sheekadan soo socota, dabeed go’aan gaadh adiga oo madax banaan, hana noqon kii uu yidhi (IHN) Ibrahim Gadhle, Maskaxdaadu yey noqon maqal lagula leeyahay, oo 10 muftaax iyo lagu furo masaabiir”. Waxa weeye Madax-weyne Siilaanyo waa kii u tegay arimo Caafimaad Dalka Imaaraadka, intii uu ku maqanaa ee uu daawadda iyo nasashadda qaadanaayey, waa kii madax-weyne/ku/xigeenkii Saylici oo uu dabadda ka wado Ina Biixi, ay ololaha cod doonka iyo nadiifinta ah, wixii ay u tiriyaan in ay la socdaan Waddani, ama ka soo jeedda qof ay taratan ugu jiraan Mdaxnimadda somaliland, ay ka bilaabeen goboladda Galbeed ee Dalka. Sidaas oo ay tahay, baa isaga oo weliba mar kale u sharaxan madax-weyne ku xigeenka Ina biixi, buu saylici uu shaqo ka fadhiisin ku sameeyey Badhisaabkii Gobolka Awdal, isaga oo arimo been ah ku eedeeyey, kuwaas oo aanu shuql ku lahayn isagu, laakiin uu saxeexay Badhisaabkii Reer Awdal ay hadhka cad ka eryeen Boorame ( Waa Ramaaxa Jooga Togdheere). waxa loogu marmar-soonayaana waa huu-haa aanay waxba ka jirin, laakiin lagu qarinaayo Ummadad Reer Awdal ma taageeraan Kulmiye, sababta ay ku andacoonayaan ee u qarsoona ay tahay, Mustafe Shiine baa dhex-dhexaad ah, ama Waddani buu hoosta kala socdda oo waa H.Yoonis, ilayn wax kale isugu may imane, reer Awdala way jecel yihiine Mustafe Shiine. sidaas awgeed baa shaqadii looga fadhiisiyey, ilayn ma eryi karo oo madax-weynaha oo qudha baa taa samayn kara’e.
Jabka dhacay wuxu yahay akhristaw, ee ummaddii ka wareertay, cid kastaaba yaabtay, soo shaac bixiyey xumaanta jirta, halka ay kala taagan yihiin madax-weynaha iyo madax-weyne/ku/xigeenku, taas oo si wacan loo fahmay in aanay isku san banaanayn, ee midba wuxu doono fuliyo, wax wadda shaqayn iyo isku kalsoonaan ahina aanay jirin, waxana iyana meesha timi, In madax-weyne/ku/xigeenkii uu ina Biixi hoos iman lahaa isaga, waa nasiib darro’e uu Askarigu amar siiyo, xaalku noqday ” Sareeye hoosee”, fartana uu ugu yeedhaayo Ina Biixi Saylici oo aanu odhan karin aniga baa meesha ka sii madax-weyne ah, ee sidaa ha iila dhaqmin, ee aniga amarkayga qaado hogaamiye Xusbi baad tahaye, waxana la ogaaday, shakina aanu ku jirin, in uu ina Biixi yahay ka amarka ku bixiyey, Mustafe Shiine ( Badhisaabkii Awdal) ee shaqo ka fadhiisinta lagu sameeyey. Waxba yaan hadal kugu daaline, Markii Illaah caafimaad ha siiyo’e uu ka soo nabad noqday Imaaraadka Madax-weyne Siilaanyo, wuxu la kulmay arimaha sare ku qoran oo isku cakirmay, mulaaqmay, oo labadooddii ( waa ina biixi, iyo sayliciye) meeshii sii walaaqee.
Muxuu hadaba Isna ( Waa Siilaanyo’e) ka sameeyey, ilayn waa la ficilta-mayaaye waa ka-ka daba qaatay mafiiq, uu ku xaadhaayo, wixii ay sii sameeyeen Saylici iyo Askariga Ina Biixi intuu maqanaa. Wuxu dalacsiiyey ninkii loo qayilay ( Waa badhisaabkii shaqadda laga fadhiisiyeye ee Mustafa Shiine), oo uu ka dhigay Badhisaabkii ugu qiimaha iyo qaayaha badnaa dalka ee Caasimadda Somaliland. Taasi waxay dhabar jab, tiqo la’aan, Niyad Xumi ku riday, Ina Biixi oo ogaaday in siilaanyo waxa uu afka ka leeyahay iyo sidda uu runtii la rabaa ay kala duwan yihiin, taas oo ah in aanu guulaysan ina Biixi. Waa la isu khuurinayaa, dad-kana dushaa ba la iska tusayaa in la wadda socdo, hoostana waa la iska goynayaa, oo midba ka kale buu cidhib-tiisa jarayaa. arintani waxay ku noqonaysaa Ina Biixi iyo Saylici Waq weyn oo aanay ka soo kaban, waayo ninkii ay dileen, baa ka taliya imika Caasimadda, iyakaana khasab ay ku tahay, in ay kala tashadaan, hoosna yimaadaan isaga. markuu doonana uu ku yidhaaho, gobolka qayladda iyo rabshadaha kala fadhiista magaaladda, anshax xumiddii ay hudheeladda Waddani xafladaha ku qabsadana ay kula kacayeen, waynu eegi doonaa waxa kala qabsadda, Mustafe Shiine oo Siilaanyo taageersan yahay Caasimaduna hoos timaado, iyo Saylici iyo ina Biixi oo dhan ah, marka shaqo ay isugu yimaadaan iyo waxa lagu kulmo, waxa ka soo bixi doona, baynu u fadhiyi doonaa, haddii alle idmo.